Burma Partnership » Invitation for the Report Launch On September 23, 2015
By Asia Justice And Rights and Kachin Women's Association Thailand • September 22, 2015
Asia Justice And Rights (AJAR) and Kacin Women’s Association Thailand (KWAT) are pleased to invite you toapress conference for the launch of the report “Opening the box: Women’s Experiences of War, Peace, and Impunity in Myanmar”.
The booklet contains the stories of 29 women survivors from Myanmar – former political prisoners from Yangon, and ethnic women from the conflict zones of Karen and Kachin State. It is based on our research withatotal of 140 women victims in Indonesia, Timor-Leste, and Myanmar using participatory tools. The report also presents the key findings of our research that are most relevant for Myanmar, introduces AJAR’s participatory research approach, and providesalist of recommendations for addressing truth, justice, and reparations for the women survivors of Myanmar.
The research is collaboration between Asia Justice and Rights (AJAR), Kachin Women’s Association Thailand (KWAT), Karen Women Empowerment Group (KWEG), and Women’s Organizations Network of Myanmar (WON) between January 2014 and July 2015.
Representatives from AJAR, KWAT, KWEG and WON will present the report, and outline the results of the research and our recommendations.
Location: House of Memories, NO. 290, U Wizara Road, Kamaryut Township, Yangon, Tel: 01-­‐525195,01-­‐534242
Note: The session will be in English and Burmese. Translation will be provided.
For more information please contact to shkawng@asia-­‐ajar.org,
+95 (0) 925-­‐4413-­‐447
Download the invitation to report launch in English here.
အစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲအစီအစဉ်ဖိတ်ကြားလွှာကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၅ တွင်ပြုလုပ်မည့် အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲအစီအစဉ်ဖိတ်ကြားလွှာ
အာရှတရားမျှတမှုနှင့် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအဖွဲ့ (AJAR) မှ ၄င်း၏ အစီရင်ခံစာဖြစ်သော “ ဖွင့်နေသောသေတ္တာ -မြန်မာပြည်ရှိ စစ်ပွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်ခွင့်တို့ကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့သော အမျိုးသမီးများ၏ အတွေ့
အကြုံများ” အစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲအစီအစဉ်သို့ တက်ရောက် ပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရန်ကုန်မှ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ ကရင်နှင့် ကချင် ပြည်နယ်ရှိ ပဋ္ဋိပကဖြစ်ပွားရာ ဒေသတို့မှ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သော အမျိုးသမီး (၂၉) ဦးတို့၏ အကြောင်းအရာ တို့ကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။ ဤစာစောင် သည် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီး အင်ဒိုနီးရှား၊ တီမောလက်စ်တီနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့မှ အမျိုးသမီး (၁၄၀) ဦးတို့အား AJAR မှ သုတေသန ပြုထားခြင်းကိုဖော်ပြ ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင ဆက်စပ်ပြီး AJAR ၏ အဓိကရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တို့ကိုတင်ပြထားခြင်း၊ AJAR ၏ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနည်းလမ်းအထူးပြု သုတေသနချည်းကပ်နည်း တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့် အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအမျိုးသမီးတို့အား လျော်ကြေးများပေးခြင်း စသည်တို့ကိုဖြေရှင်းပေးသော အကြံပြု ချက် တို့က ဤစာစောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဤစာစောင်သည် အာရှတရားမျှတမှုနှင့် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအဖွဲ့ (AJAR) နှင့်အတူ ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး(ထိုင်းနိုင်ငံ)၊ ကရင်အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ယက် (မြန်မာ) တို့ ပူးတွဲထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
ဤမိတ်ဆက်ပွဲ အစီအစဉ်တွင် AJAR, KWAT, KWEG နှင့် WON ကိုယ်စားလှယ်များမှ အစီရင်ခံစာ နှင့် သုတေသနမထွက်ရှိလာသော ရလဒ်များနှင့် အကြံပြုချက်များကို တင်ပြ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
နေ့ရက် : ၂၃ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၅ ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
အချိန် : နံနက် ၁၀ နာရီ – ညနေပိုင်း ၁၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်
နေရာ : House of Memories, အမှတ် ၂၉ ၀၊ ဦးဝိဇာရ လမ်းမ၊
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ Tel: ၀၁-၅၂၅၁၉ ၅ ၊ ၀၁-၅၃၄၂၄၂
မှတ်ချက်– အစီအစဉ်ကို မြန်မာနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်ပိုမိုသိလိုပါက shkawng@asia-­‐ajar.org, +95 (0) 925-­‐4413-­‐447 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Tags: Asia Justice And Rights, Kachin Women's Association – Thailand, Karen Women Empowerment Group (KWEG), Women’s Organizations Network of Myanmar